दाङ समृद्धिका आधारहरु – Janaubhar
दाङ समृद्धिका आधारहरु
प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक २२, २०७४ | 268 Views ||
राज्य पुनःसंरचनासँगै मुलुक औपचारिकरुपमा संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेको छ । संघीयताले स्वाभाविक रुपमा केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई विकेन्द्रित गरेर गाउँ–गाउँसम्म राज्यको पहुँच पु¥याउने छ । शासन प्रणालीकै कारण हालसम्म मुलुकको विकास काठमाडौं केन्द्रीत थियो । अब भने विकास गाउँमुखी बन्नेछ । नयाँ संविधानअनुसार पहिलोपटक संघीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यसपटकको निर्वाचनमा दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा राखेका छन् ।
देशभर चिसो बढ्दै गएको छ तर राजनीतिक तापक्रम भने चढ्दै गइरहेको छ । चुनावले सबैलाई छोएको छ । दाङमा पनि चुनावी माहोल तातिएको छ । पार्टीलाई विजयी बनाउन दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा दाङको समृद्धिका आधारहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आखिर दाङ समृद्धिका आधारहरु के हुन् ? यसका विषयमा गम्भीर बहस र छलफल आवश्यक छ । दाङमा विगतको तुलनामा यसपटकको निर्वाचन अलि बढी रोचक हुने देखिएको छ । विशेषतः वाम गठबन्धनका दुई जना हेवीवेटका नेताहरु सहकार्य गर्दै चुनावी मैदानमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिष्प्रर्धा गर्दैछन् भने नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोख्रेल प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र नं २ को १ मा चुनाव लड्दैछन् । यी दुई नेताको उम्मेदवारीले दङाली जनतालाई उत्साहित र दाङलाई समृद्धिमा माथि उठाउन सम्भव तुल्याएको छ ।
विकासको मोडल राजनीतिक नेतृत्वकै पहलमा हुन्छ । हामीले पछिल्लो पटक छिमेकी मुलुकहरु चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले अघि सारेको विकासको मोडल होस् अथवा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अगाडि सारेको विकासको मोडल । राजनीतिक नेतृत्वको उचित पहलकदमी बिना गरिएको टुक्रे विकासबाट मुलुक तथा प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने कुरा छिमेकी मुलुकहरुको उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौं । पछिल्लो पटक उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दाङलाई पश्चिम नेपालको आर्थिक हब बनाउने कुरा निकै जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेका आधारहरुलाई साँच्चिकै प्रयोग गर्ने हो भने दाङ समृद्ध हुन धेरै बर्ष लाग्ने छैन । विकासको प्रमुख आधार भनेको सडक सञ्जाल नै हो । सडक सञ्जालले दाङलाई अन्य जिल्लाहरुसँग जोड्नुका साथै यहाँको उत्पादनको बजार विस्तार गर्नेछ ।
महराले प्रस्तुत गरेको अर्को आधार हो, दाङ पर्यटकीय क्षेत्रको केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ । लुम्बिनीलाई दाङ हुँदै रारासम्म जोड्न सकियो भने दाङ केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई हामीले दाङ हुँदै रारा, स्वर्गद्वारी, जलजला, छायाक्षेत्र लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा पु¥याउन सक्छौं । दाङमा पनि धारपानी, जखेरा ताल, बाह्रकुने दह, चमेरे गुफालगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको उचित प्रचारप्रसार तथा प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीमा हामीले बार्षिक चिनियाँ जनसंख्याको एक प्रतिशत मात्र पर्यटकलाई ल्याउन सकियो भने बार्षिक करिब एक करोड पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन् । अन्य मुलुकबाट पनि हामीले थुप्रै पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई दाङमा एक÷दुई दिन मात्र बसाल्न सकेमा पनि यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । दाङलाई सडक सञ्जालको माध्यमबाट ६ नं. प्रदेश र ७ नं. प्रदेशसँग सजिलै जोड्न सकिन्छ । ५ नं. प्रदेशको राजधानी दाङलाई तोक्न यो राजनीतिक नेतृत्वले अवश्य पहल गर्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वको पहललाई सार्थकता दिनको लागि आम दाङवासीहरु विकासका सवालमा एक हुन जरुरी छ ।
Prevवाम गठबन्धनमाथिका व्यर्थ आरोप
Nextबाम गठबन्धन क्षेत्र नं. १ को संयुक्त प्रशिक्षण